Nhau dzeBhaibheri: Dhavhidhi naGoriati - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
VaFiristia vanouyazve kuzorwisana naIsraeri. Vakoma vatatu vaDhavhidhi zvino vari muuto raSauro. Zvino rimwe zuva Jese anoudza Dhavhidhi kuti: 'Enda nezviyo nezvingwa kuvakoma vako. Wana kuti vakadini.'
Panosvika Dhavhidhi pamusasa weuto, anomanyira kumutsara weuto kundotsvaka vakoma vake. Hofori yechiFiristia inobuda kuzoita musere pavaIsraeri. Ave achikuita mangwanani ari ose namadekwana kwamazuva 40. Anodanidzira kuti: 'Sarudzai mumwe wavarume venyu azondirwisa. Kana akandikunda ndokundiuraya, tichava varanda venyu. Asi kana ndikakunda ndokumuuraya, muchava varanda vedu. Ndinokukokerai kusarudza mumwe munhu kuzondirwisa.'
Dhavhidhi anobvunza vamwe vamasoja kuti: 'Munhu anouraya uyu muFiristia ndokubvisa Israeri paruzvidzwo urwu uchawaneiko?
'Sauro achapa pfuma zhinji munhuyo,' musoja anodaro. 'Uye achamupa mwanasikana wake kuva mudzimai wake.'
Asi vaIsraeri vose vanotya Goriati nokuti mukuru kwazvo. Anopfuura tsoka 9 (anenge mamita 3) kureba, uye anomumwe musoja anomutakurira nhovo yake.
Mamwe masoja anondoudza Mambo Sauro kuti Dhavhidhi anoda kurwisa Goriati. Asi Sauro anoudza Dhavhidi kuti 'Haungarwisi muFiristia uyu. Unongova hako kakomana bedzi, uye iye ave ari musoja upenyu hwake hwose.' Dhavhidhi anoti: 'Ndakauraya bere neshumba zvakatora makwai ababa vangu. Saka muFiristia uyu achava sechimwe chazvo. Jehovha achandibetsera.' Nokudaro Sauro anoti: 'Enda, uye Jehovha ngaave newe.'
Dhavhidhi anoburukira parwizi ndokutora hurungudo 5, ndokudziisa muhomwe yake. Anotora chipfuramabwe ndokundosangana nehofori. Apo Goriati anomuona, haangazvidaviri. Anofunga kuti kuchava nyore kuuraya Dhavhidhi.
'Uya kwandiri,' Goriati anodaro, 'uye ndichapa muviri wako kushiri nemhuka kuti zvidye.' Asi Dhavhidhi anoti: 'Unouya kwandiri nomunondo, nepfumo nemharu, asi ndinouya kwauri nezita raJehovha uyo uchakuisa mumaoko angu uye ndichakuriga.'
Ipapo Dhavhidhi anomanyira kuna Goriati. Anotora dombo muhomwe yake, anoriisa muchipfuramabwe chake, anoriposhera nesimba rake rose. Dombo rinonanga mumusoro maGoriati, uye anowira pasi ndokufa! Apo vaFiristia vanoona kuti mhare yavo yawa, vose vanotenderuka ndokutiza. VaIsraeri vanovamanyira ndokukunda hondo.
1 Samueri 17:1-54.
Goriati anodenha uto revaIsraeri achiti chii?
Goriati akakura zvakadini, uye Mambo Sauro anovimbisa chii kumurume achauraya Goriati?
Dhavhidhi anotii paanoudzwa naSauro kuti haangarwi naGoriati nokuti anongova zvake kakomana?
Pakupindura Goriati, Dhavhidhi anoratidza sei kuti anovimba naJehovha?
Sezvaunogona kuona pamufananidzo Dhavhidhi anoshandisei kuuraya Goriati, uye vaFiristia vanoita sei izvi zvaitika?
Verenga 1 Samueri 17:1-54.
Chii chaiita kuti Dhavhidhi asatye, uye tingatevedzera sei ushingi hwake? (1 Sam. 17:37, 45; VaEf. 6:10, 11)
Nei vaKristu vachifanira kudzivisa kukwikwidza kwakafanana nokwaGoriati pavanoita mitambo kana kuti pavanenge vachitandara? (1 Sam. 17:8; VaG. 5:26; 1 Tim. 4:8)
Mashoko aDhavhidhi anoratidza sei kuti aitenda kuti Mwari aizomutsigira? (1 Sam. 17:45-47; 2 Mak. 20:15)
Pane kurondedzera bedzi makwikwi pamauto maviri akarwisana, nhoroondo iyi inoratidza sei kuti chaizvoizvo kurwisana kwacho kwaiva pakati pavanamwari venhema naMwari wechokwadi, Jehovha? (1 Sam. 17:43, 46, 47)
Vakasara vakazodzwa vanotevedzera sei muenzaniso waDhavhidhi wokuvimba naJehovha? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Zvak. 12:17)
Verenga nyaya iyi yemuBhaibheri inonakidza kuti udzidze zvakaita kuti Dhavhidhi ashinge zvakadaro.